အဘယ်ကြောင့်ငါ register သင့်ပါသလဲ?
တစ်မိနစ်လျှင်ညွှန်ပြချက်စကားများ (wpm) ကိုသင်မည်သို့တိုင်းထွာသလဲ?
ငါသင်ခန်းစာကိုစတင်တဲ့အခါ, အစီအစဉ်ကျွန်မ Shift + အက္ခရာကိုနှိပ်ဖို့ရှိသည်ဖော်ပြသည်။ အဲဒီလို့ဘာဖြစ်လို့?
1) သင်မှတ်ပုံတင်ပါက, သင်သည်သမိုင်းနှင့်အတူတိုးတက်မှုများသတင်းအချက်အလက်ပါလိမ့်မည်။
2) သင်) သေးငယ်တဲ့လှူဒါန်းမှုအပြီးတွင် (ကြော်ငြာများမပါဘဲသင်ယူနိုင်ပါသည်
သေးငယ်တဲ့လှူဒါန်းမှုအပြီးတွင်ငါတို့သည်သင်တို့၏အကောင့်မှကြော်ငြာများကိုဖယ်ရှားပေးပါလိမ့်မည်။ ဤလမ်းညွှန်လုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်, လူနာဖြစ်လိမ့်မည်။
3) လူမှုကွန်ယက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ website မျှဝေ https://www.facebook.com/TouchTypingStudy အတွက်ကျွန်တော်တို့ကို join ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းသင်၏မိတ်ဆွေများကိုပြောပြပါ
touch-ရိုက်ထည့်ရန်ကောင်းစွာသင်ယူဖို့လိုအပ်အချိန်ပမာဏကိုသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစရိုက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဒါဟာမှန်မှန်လေ့ကျင့်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါသည်။ ရလဒ်ကောင်းငါတို့သည်သင်တို့တစ်နေ့လျှင် 1 သင်ခန်းစာယူမှအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဘယ်အရပ်ရှိသမျှတို့ကိုအက္ခရာများသင်တို့သည်အစာရှောင်စာရိုက်ဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးကြသည်ကို သိ. , အောက်မေ့တော်မူပါ။ သင့်ရဲ့လက်ချောင်း keys တွေကိုစဉ်းစားသို့မဟုတ်ကီးဘုတ်မှာရှာနေစရာမလိုပဲ, လှုပ်ရှားမှုပုံစံများသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီသတ်မှတ်ထားတဲ့ key တည်ရှိရာ၏ဟုခေါ် 'ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုမှတ်ဉာဏ်' ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အော်တိုမက်တစ်လှုပ်ရှားမှုများကိုသာလောက်အထပ်ထပ်ပြောဆိုခြင်းမှတဆင့်တီထွင်နေကြပါတယ်။ ကိုသတိရပါ - သာအလေ့အကျင့်ကိုဖြော!
WPM ကိုတိုင်းတာရန်အစီအစဉ်များစွာသောစကားသင်တစ်မိနစ်လျှင်တိကျမ်းစာ၌လာသည်ရှိသည်မည်မျှကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏။ space နဲ့ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်အပါအဝင် =5အက္ခရာများ 1 စကားများကို။
နည်းပညာပိုင်းအခြမ်းမှသင်တို့ကိုသာအင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုပါမယ်။ သို့သော်သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ touch နဲ့စာရိုက်စွမ်းရည်တိုးတက်စေရန်လှုံ့ဆော်မှု, လိုလိုလားလားလိုအပ်ပေလိမ့်မည်။
က Lock ကိုသင်စာရိုက်တဲ့အချိန်မှာမဖြစ် caps သေချာစေပါ။ ထို Caps ဆေး Lock ကိုပေါ်နေပါကအစီအစဉ်ကိုမေးမြန်း key + Shift ကိုတစ်ပြိုင်နက်နှိပ်မေးသည်။
လေ့လာမှုစာရိုက်သူသို့မဟုတ်သူမ၏ touch နဲ့စာရိုက်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုသူလူတိုင်းအတွက်အဘို့ဖြစ်၏။ Touch ကိုစာရိုက်မှန်ကန်သော keys ကိုတွေ့ရှိရန်ကီးဘုတ်ကကြည့်ရှုခြင်းမရှိဘဲ, ရေးထည့်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်သောကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့, စာရိုက်လေ့လာမှု dyslexia နှင့်အတူလူတို့အဘို့လည်းသင့်လျော်သည်။ touch နဲ့စာရိုက်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူဤလူ touch နဲ့စာရိုက်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘဲဒေသများ၏တစ်အရေအတွက်ကွဲပြားတဲ့အားသာချက်ရှိသည်။ အချို့သော dyslexic လူနှစ်ဦးအမြန်နှုန်းနှင့်ဖတ်ရလွယ်ကူရှုထောင်မှလက်ရေးနှင့်အတူဒုက္ခသည်အတိုင်းရိုက်နှိပ်အလုပ်ထို့ကြောင့်ပိုပြီးအဆင်ပြေပါလိမ့်မည်။